ओल्गा मुर्रे सानो छँदा – RAJESHares KOIRALAnd
म छ वर्षको हुँदा हामी अमेरिका आयौं । मेरा दिदी, बहिनी र दाजु जन्मनुभएको हो । म तेस्रो हुँ । सुरुमा अंग्रेजी बोल्न गाह्रो भयो । बुबाआमाले हामीलाई हामीजस्ता साना साथीसँग खेल्न पठाउनुहुन्थ्यो । तीन महिनामै हामीले फरर अंग्रेजी बोल्न जान्यौं । अनि स्कुल गयौं । मैले न्युयोर्क पब्लिक स्कुल पढें । यो सरकारी स्कुल हो । यहाँका सरकारी स्कुलमा ड्रेस लाउनु पर्दैन । स्कुल हिंडेर जान्थे । २० मिनेटमा पुगिन्थ्यो ।
मलाई मनपर्ने विषय इतिहास हो । स्कुलमा म राम्रो विद्यार्थी थिएँ । धेरै जान्ने वा जान्दै नजान्ने होइन । म धेरै साथीमाझ प्यारी थिएँ । सबैसँग घुलमिल हुन्थें । म अरूलाई माया र दया गर्ने स्वभावकी थिएँ । अझै करुणा र न्यायमा विश्वास गर्छु ।
सानोमा किताब पढ्न रुचि राख्थें । कथाजस्ता र अन्य पुस्तक पढ्थे । मलाई ‘रोलर स्केट’ मन पर्थ्यो । त्यो पनि म साथीहरूसँग खेल्थे । मलाई भ्वाइलिन बजाउन मन पर्थ्यो । स्कुलमा विभिन्न क्लब थिए । त्यसमा म सदस्य थिएँ । म स्कुलमा विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिएर धेरै प्रमाणपत्र पाएकी थिएँ । मलाई हटडग र आइसक्रिम खुब मन पर्थ्यो ।
बिदाका बेला परिवारका सबै सदस्य धेरै घुम्थ्यौं । शहरबाहिर जान्थ्यौं । बिदाभरलाई घर भाडामा लिन्थ्यौं । त्यहि बस्थ्यौं । त्यहाँ आगो ताप्थ्यौं । गीत गाउथ्यौं । छलफल गर्थ्यौं ।
बुबाआमाले हामीलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो । बुबा विश्वका विभिन्न समाचार कति सुन्दै छौं की छैनौं भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो । आफूले जानेको सिकाउनुहुन्थ्यो । खाना टेबलमा त्यस्ता विषयमा छलफल हुन्थ्यो । आमा भने हामीले कस्तो खायौं ? हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ ? जाडोमा न्यानो लुगा लगायौं की लगाएनौं ? भन्ने ख्याल गर्नुहुन्थ्यो ।
घरमा बेलाबेला दिदीबहिनी र दाजुसँग तर्कातर्की हुन्थ्यो । म आफ्ना कुरा राख्थे । जो पनि आफ्ना कुरा ठीक हो भन्छन् । सबै मेरा कुरा ठीक होइन भन्थे । मलाई छुल्याहा भन्थे ।
स्कुलबाट फर्केपछि हामी खाजा खान्थ्यौं । एक घण्टा जति खेल्थ्यौं । अनि पढ्न बस्थ्यौं । यो हाम्रो रुटिन नै थियो ।
स्कुल पढ्दा मेरा अक्षर राम्रा थिएनन । अचम्म लाग्छ । कहिलेकाही त म मेरै अक्षर चिन्दीनथें । पढ्न सक्दिनथें ।
अन्त्यमा, म नेपालका साना साथीलाई धेरै पढ्नु भन्छु । पछि धेरै राम्रो मान्छे हुन सानैमा मेहेनत गर्नुपर्छ । आफू के बन्न खोजेको हो । त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । मन दह्रो बनाउनुपर्छ । त्यसो भनेर रमाउँदै मेहेनत गर्नुपर्छ ।
(कान्तिपुर दैनिकको २०६७ कार्तिक १४ को बालकोसेली ‘कोपिला’ मा प्रकाशित, शब्दः राजेश कोइराला/अमेरिका, तस्बिर : नेपाल युथ फाउन्डेसन)